Balli ama wabi, Church of God Switzerland Worldwide (WKG)
Barkaduhu had iyo jeer waa meelo ay ka buuxaan dhoobo, algae, naqdiyeyaal yaryar iyo beero dabacsan. Barkadaha ay quudiyeen ilaha biyaha cusub waxay kor u qaadi karaan nolosha welina waxay u beddelaan karaan biyo fadhiya. Haddii biyuhu weli jiraan, waxaa ka maqan oksijiin. Dhirta algae iyo dhirta korsashada ayaa la wareegi kara. Taa bedelkeeda, biyaha cusub ee wabi qulqulaya ayaa quudin kara noocyo badan oo kalluun ah. Haddii aan u baahdo biyo la cabbo, xaqiiqdii waan doorbidi lahaa webiga oo ma aha balli!
Nolosheenna ruuxiga ah waxaa lagu barbar dhigi karaa balliyada iyo wabiyada. Waan u istaagi karnaa, sida balli qulqulaya oo aan dhaqaaqayn, taasi waa qulqulka nolosha ay naftoodu ku badato. Ama waxaan nahay kuwo cusub oo nool sidii kalluun webiga ku jira.
Si uu u sii ahaado mid cusub, wabigu wuxuu u baahan yahay il adag. Markay gu'ga qallalaan, kalluunka wuxuu ku dhintaa wabiga. Ruux ahaan iyo jidh ahaanba, Ilaah waa ishayaga, kaas oo na siiya nolol iyo xoog xoog leh oo si joogto ah noo cusboonaysiiya. Ma aha inaan ka walwalayno in Ilaahay waligiis lumi doono xooggiisa. Waxay la mid tahay webi qulqulaya, xoog badan oo had iyo goor cusub.
Injiilka Yooxanaa, Ciise wuxuu yidhi: "Ku alla kii oomman, ii kaalay oo cabb! Kii i rumaystaa, in, sida Qorniinku wuxuu leeyahay, ka kuwaas oo in Wabiyaal biya ah duuli doona nool jirka " (Yooxanaa 7,37-38).
Martiqaadkan in loo yimaado oo la cabbo waa soo afjaridda tixraacyo taxane ah oo ku saabsan injiilkan: biyaha ayaa loo beddelay khamri (Cutubka 2aad), Biyaha Dhalashada (Cutubka 3aad), biyaha nool (Cutubka 4aad), Biyaha Daahirinta ee Bethesda (Cutubka 5aad) iyo dejinta biyaha (Cutubka 6aad). Dhammaantood waxay tilmaamayaan inuu Ciise yahay wakiilka Eebbe, oo isagu ku siiya deeqsinimada Eebbe nolosha.
Miyaanay ahayn wax la mid ah Ilaah oo ah kuwa oomman (dhamaanteen) waddankan qalalan oo tabar daran oo aan biyo lahayn? David wuxuu u sharaxayaa sidan: «Ilaahow, waxaad tahay Ilaahayga aan doonayo. Naftaydu adigay kuu oomman tahay, jidhkaygu adigauu kaaga baahan yahay dhul qalalan oo engegan oo aan biyo lahayn. (Sabuurradii 63,2).
Waxa kaliya ee uu inaga doonayo inaan sameyno ayaa ah inay yimaadaan oo cabbaan. Qof kasta wuu imaan karaa oo ka cabbi karaa biyaha nolosha. Maxay dad aad u oomman u hor istaagaan isha biyaha horteeda oo ay u diidaan inay wax cabbaan?
Miyaad harraadsan tahay, xataa laga yaabee inaad harraadsan tahay? Ma waxaad u eg tahay balli dhaldhalaalaya? Nasiinta iyo cusboonaysiinta ayaa u dhow sida Kitaabkaaga oo ducada isla markiiba la heli karo. Kusoo dhawow maalin walba ciise oo ka soo qaado ilbiriqsi wax ku ool ah oo qancinaysa isha noloshiisa hana ilaawin inaad biyahan la wadaagto nafta kale ee harraadsan.